Kuvandudzwa kutsva kweGoogle Mifananidzo nemabasa matsva uye kugadzirisa | IPhone nhau
Zvitsva zveGoogle Mifananidzo inogadziridza nezvitsva maficha uye nekuvandudza
Parizvino iri pamusika, iyo yega sevhisi iyo inotipa isu, zvachose mahara, nzvimbo isina muganho mugore redu rekuchengetedza chero mhando yekutora mifananidzo kana vhidhiyo iGoogle Mifananidzo. Kunyangwe iine chinyorwa chidiki chisingakanganise vashandisi vazhinji nekuda kwemaitiro matsva evanogadzira nharembozha, zvirinani maererano nekutora mifananidzo tinotaura. Google Mifananidzo inotibvumidza kuchengeta chero pikicha ine resolution yakaderera pane gumi nematanhatu Mpx isina chero muganho. Kana tikataura nezve vhidhiyo, tinogona zvakare kuchengeta chero mhando yevhidhiyo asi nechisarudzo chakaderera pane 4k.
Mwedzi yakati wandei yapfuura, Google yakagadzirisa iyo Photos application nekubatanidza Spotlight muinjini yekutsvaga, kuti tikwanisewo kutsvaga mafoto akachengetwa mugore kuburikidza neinjini yekutsvaga yeIOS. Iyo Mountain View-yakavakirwa kambani ichangobva kuburitsa nyowani nyowani iyo inokutendera iwe kutanha mafoto zvakananga kubva mugore, pasina kuatora iwo kune yako kifaa uye wozoaisa iwo zvakare kuti uchengete shanduko. Iri rinogona kuve zano rakanaka kana rakaipa zano, zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi.
Asi pamusoro pezvo, Google yakagadzirisawo mashandisirwo echishandiso maererano nekushandisa bhatiri, kushandiswa kunotyisa apo mifananidzo yacho payakatanga kuisirwa otomatiki. Kushandiswa kwedata neapp iyi zvakare kurota, hope dzehusiku idzo maererano neGoogle dzave nani zvakanyanya kunyanya patinotsvaga raibhurari yese yakachengetwa mugore.
Zvinoenderana neazvino data rekushandisa rakapihwa neGoogle, Google Mifananidzo sevhisi iri kuchengeta ingangoita 13.7 petabytes. Pamusoro peiri ruzivo rwese, kutenderera zviuru makumi maviri nemana zvemamiriyoni zvinoenderana neselfies Ichi chishandiso chinowanikwa kurodha mahara uye chinoenderana seye iOS vhezheni 24.000. Izvo chete zvinodiwa kuti ushandise sevhisi iyi kuve neakaundi account yeGmail.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Zvitsva zveGoogle Mifananidzo inogadziridza nezvitsva maficha uye nekuvandudza
Ndini ndega here uyo mutengo wekuve neGoogle mapikicha unoratidzika kunge unodhura pane sevhisi yavanopa "mahara"?
Handina uye ndinovimba handimbove nazvo.
Ndinobvunza izvi nekuti mune zvese zvandinoona pamambure zvinoita kwandiri kuti ndini ndega ndisingade kuva nemutengo iwoyo.
Peek Karenda, yemahara minimalist karenda yenguva yakatarwa